Politika avokoa ny fiainantsika - Madagascar Informations
5 mars 2018 Madagascar Informations Aucun commentaire
Tsy azo lavina mila olona matahoatra an’Andriamanitra hitondra ity firenena ity olony devoly matoa tsy manaiky izany hoy Pasteur Mailhol .
Ho an’ny mpanao politika tsy mahalala afa-tsy ny tenany ,olona natao hangoron-karena ,mpandainga,mpangalatra ary mpanao kobaka ambava noho izany raha mbola ireo no tafaverina eo dia tompon’antoka amin’ny safidiny ny tsirairay .
Ho an’ireo milaza fa tsy misy hifandraisany ny Politika sy ny Baiboly dia averina eto indray fa mbola betsaka ny tsy mahazo ny dikany ny hatao hoe politika .
Fanatsarana ny fiainany olona no dika mazava mahafehy Politika ,fa ny mpanao politika sy ireo minia tsy mahafantatra ny dikany no manova ny heviny
Politika avokoa ny fiainantsika raha mijery tsara,ohatra ny Politikany Baiboly ny famonjena ny olona fa ny zava misy dia Politikan’ny fanasana atidoha hiniana hataon’ireo mpanao politika galifantsy no misy mba hahazoana fanjakana izany hoe politika mifototra amin’ny fitiavan-tena .
Amin’izao fotoana izao izay tsy manao kolikoly no tojo olana na aiza na aiza hoy Pasteur Mailhol ho azy tsy hanana Havana io ary tsy hahalalana zanaka eny fa na mpivavaka eo anivony Fiangonana Apocalypsie aza dia hampiharana ny lalana avokoa rehefa tsy manara-dalana .
Tato anatiny fotoana fohy nifanotofany mpanao Politika ny fanolorana vina ho an’I Madagasikara tsy misy maharatsy an’izany saingy vina mbola miankindoha amin’ny vahiny ary tsy mahavaha ny olany vahoaka amin’izao ankehitriny izao ve izany .
← SNU et PRM à Taolagnaro
Coopération internationale →
Hommage à Tsilavina Ralaindimby
Un mandat sans redoublement pour l’UE